गायक दुर्गेश थापालाई प्रेमिकाले बिच सडकमै थ’प्प’ड लगाएपछि… (भिडियो हेर्नुस्) – Khabaarpati
गायक दुर्गेश थापालाई प्रेमिकाले बिच सडकमै थ’प्प’ड लगाएपछि… (भिडियो हेर्नुस्)
January 5, 2021 goodmamLeaveaComment on गायक दुर्गेश थापालाई प्रेमिकाले बिच सडकमै थ’प्प’ड लगाएपछि… (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाण्डौ। आफुले निकै माया गरेकी प्रेमिकाले बिच बाटोमा थ’प्प’ड हा’ने’पछि प्रेमीको मनमा कस्तो छाप पर्छ होला ? आफ्नो प्रेमिका आँखा अगाडी नै अरुलाई अंगाल्न पुगेको कुन प्रेमीले सहन सक्छ होला ? यस्तै भावना समेटिएको नयाँ गीतमा कलाकार तथा गायक दुर्गेश थापाले निकै मार्मीक अभिनय गरेका छन् ।
कोहलपुरे ठिटो मोहन कुमार खत्री ले “पत्थरको जस्तो मुटु ” बोलको म्युजिक भिडियोमा दुर्गेशको जिवन्त अभिनय देख्न सकिन्छ । सोमबार काठमाण्डौमा एक समारोह बिच उनले आफ्नो गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरेका हुन ।
मोहन कुमार खत्रीको शब्द, आशाराम गुरुङको संगीत र प्रबिण बेडवालको सुमुधुर स्वर रहेको उक्त गीतमा चर्चित मोडल एवम गायक दुर्गेश थापा स्मृती बलामी र ध्रुव रिजाल ले अभिनय गरेका छन । त्यस्तै संगीत संयोजन बीबी अनुरागीको रहेको छ ।
भिडियोलाई चर्चित हाँस्य कलाकार तथा नेपाली जादुगर भनेर चिनिने शेर बहादुर गुरुङ ले निर्देशन गर्नु भएको छ । छायांकन रविन थापा मगर ,सम्पादन अमृत पन्थी को रहेको छ । यस् भिडियोलाई भ्याली फिल्मस् एकेडेमीले निर्माण गरेको छ ।
बिमोचन कार्यक्रममा चर्चित निर्देशक शिव बिक मोडल दुर्गेश थापा,सुदुरपच्चिमका चर्चित गायक चक्र बम,मिन गुरुङ ,दिपेश गुरुङ,संगीतकार बिकास सिलवाल,रबिन मगर लगायतका ब्यक्तित्वहरु को उपस्थिती रहेको थियो । भिडियोलाई दुर्गेश थापाको युट्युब च्यानल मार्फत हेर्न सकिन्छ ।
महिलाले पुरुषमा खोज्छन् यी ५ कुरा
छिट्टै विवाह गर्न लागेका विनयजंगलाई अचानक के भयो, रातारात उपचारका लागि लगियो (भिडियो हेर्नुस्)
March 10, 2021 goodmam
प्युठानमा रहस्यमय घटना ! १० महिने शिशु सहित आमाबाबुले गरे देह’त्याग (भिडियो हेर्नुस्)
December 30, 2020 goodmam